Sanator ugu baaqay Deni iyo Madoobe in aanay la fadhiisan Farmaajo ilaa uu Ra’iisal wasaare Magcaabo. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Sanator ugu baaqay Deni iyo Madoobe in aanay la fadhiisan Farmaajo ilaa uu Ra’iisal wasaare Magcaabo.
Madaxwaynaye Farmaajo, ayaa muddo bil iyo dheer ah waxa ku adkaatay in uu go’aan qaato oo uu magcaabo ra’iisal wasaare soo dhisa xukuumadda sharci ah xilliga kooban oo ka hadhsan doorashada. Waxaan arrintaasi ay sababtay isdhexyaac iyo maamul-xumo halkii ugu sarraysay maraysa.
Arrintaas awgeed, waxaa jidha xildhibaanno ku baaqay in Deni iyo Madoobe ay shardi ka dhigaan in Farmaajo uu magcaabo ra’iisal wasaare haddii kale aanay la furin wax wada hadal ah.
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, oo labada masuul ugu baaqay in ay ku adkaystaan mawqifkooda ah in madaxwaynuhu ra’iisul wasaare magcaabo, ayaa kamida Sanatarada baaqani ka soo yeeray.
“Mar haddii aanu xukuumadi jirin, hadda wixii la qabtaa waxay noqonayaan wax shakhsiyaa qabteen, ma idinkugu jirtaa qorshaha mudada aad joogtaan Xamar inaad madaxweynaha ku qancisaan inuu magacaabo Raysal wasaare,” ayuu yiri Sanator Qeybdiid.
Santar Qaybdiid, ayaa tilmaamay in madaxwayne Farmaajo haba yareetee aanay ku jirin rabitaan ah in uu ra’iisal wasaare magcaabo.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi (Deni), oo ka jawaab celiyay hadalka Sanator-ka, ayaa sheegay in Puntland ay muddo dheer ku keliyay satay dhawaaqa ah in ra’iisal wasaare la magcaabo. Hase ahaatee, waxa uu sheegay in wakhtiga aanay qorashaha ugu jirin in arrintaas uu Farmaajo kala hadlo.
Guddoomiyaha deegaan ka tirsan Kenya oo u gacan galay Al shabab
Ciidan ka tirsan Gorgor oo tababar loogu qaaday Turkiga